ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်သို့ ဂျွန်ယက်တော့ နှစ် ည ဝင်အိပ်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည်. ~ မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်သို့ ဂျွန်ယက်တော့ နှစ် ည ဝင်အိပ်ခြင်း ၃ နှစ်ပြည်.
Posted by မျိုးချစ်သူရဲကောင်းများ On 7:18 AM0comments
နေ့စဉ်နီးပါ အကြောင်းရှာပြီး ဖြစ်ပြီးခဲ့သမျှ နေ့တိုင်းကို နှစ်ပတ်လည် ရက်ကျင်းပနေတဲ့ NLD ဟာ ဒီကနေ့တော့ အထိန်းအမှတ် ပွဲတစ်ခု ကျင်းပဖို့ မေ့နေကြသည်။ ဒီကနေ့ မေလ ၅ ရက်နေ့ ကတော့ ဂျွန်ဝီလီယံ ယက်တော့ တစ်ယောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ထဲကို နောက်ပေါက်က ဝင်ရောက်ခြုံရေး အဖွဲ့တွေကိုလည်း လုံးဝ အသိမပေးခဲ့သလို ပြန်လွှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်သို့ ဂျွန်ယက်တော ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကို အားလုံးသိကြပေမယ့်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြစ်မရှိကြောင်း ကို အခုချိန်ထိပြောနေကြတုန်းပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်တွင်းသို့ ဂျွန်ရက်တော့ စတင်ဝင်ရောက်ကြောင်း သိစဉ်က ဂျွန်ယက်တော ဆိုသည်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အလွန်အင်မတန် လေးစား မြတ်နိုးသည့် ထူးခြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာပြည့်ဝသည့် စာရေးစရာတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ ရေကူးချန်ပီယံတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ချင်တာတစ်ခုကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့သည့် ခံယူချက်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြပေမယ့် ဂျွန်ရက်တောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် ၁ နှစ်ခွဲကျချိန်မှာတော့ ဂျွန်ရက်တော ဆိုသည်မှာ အစိုးရဲ့စေခိုင်းမှုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အိမ်အတွင်းသို့ဝင်ခဲ့ရသည့် စိတ်ရောဂါသည် တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့ကြပြန်သည်။ သို့သော် သေချာသည်မှာ ဂျွန်ရက်တောနှင့် အစိုးရတို့မှာ အဆက်အသွယ်ရှိသူများ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဂျွန်ရက်တောကို နေအိမ်မှာခွင့်ပြုညအိပ်ခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် မှားယွင်းသည့်အလုပ် လုပ်ခဲ့သည်မှာ သေချာပေသည်။
အမှန်ကန်သောအလုပ်လုပ်သူ၊ မှားယွင်းသောအလုပ်သူ၊ တည်ဆဲဥပဒေတစ်ခုခု ချိုးဖောက်သူ တို့အနေနဲ့ အရေးယူခံရမှာကို မကြောက်သင့်သလို ကာယကံရှင်နှင့် ပက်ဝန်းကျင်မှလူများအနေဖြင့် လည်း စဉ်းလုံးချောကောင်းနေလျှက်နှင့် အပြစ်ဒဏ်ကျကြောင်း မပြောသင့်ပါ။
ဂျွန်ယက်တော့ အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်မှာ နှစ်ည အိပ်စဉ်အတွင်း ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပွင့်လည်းမြင်သာရမယ်လို့ အမြဲပြောတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခုချိန်ထိ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရှင်းပြမှု မရှိသေးကြောင်း သိရပါတယ်။
▼ 04/29 - 05/06 (112)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်သို့ ဂျွန်ယက်တော့ နှစ် ည ဝင...
သူလေးက ဘူလေးလဲ ?
ပုလဲမြို.၍ယာဉ်စည်းကမ်း ၊ လမ်းစည်းကမ်း ရှောင်တခင်စစ...
တနသာင်္ရီးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးမြတ်ကို သရက်...
ဆားလင်ကြီးမြို.နယ် GSM မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း(စခန်း)တည်ေ...
မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း အရည်အသွေးမြှင်.တင်ရေး အလု...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနှင်. ကုလသမဂ္ဂပညာရေး ၊ သိပ္ပံနှ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်အား (ILO)အုပ်ချု...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင်.လှိုင် ပုလဲသွယ်မျိုးစပါ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းထွန်းအား လာအိုပြည်သူ. ဒီ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်အား မြန်မာနိုင်င...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်အား ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေ...
နိုင်ငံတကာနှင်.ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန် တချိန်တွင် Non...
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင်. ဆောင်ရွက်မည်. ပြည်လံ...
ခွဲစိတ်မူ.ဆိုင်ရာ စူးစမ်းရှာဖွေရေး ကရိယာသစ်တစ်မျို...
အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ သားအိမ်အတွင်းရှီ မေ.ကျန်ခဲသော လက...
အဆိပ်ပြင်းမွေးထူ ပင်.ကူသားပေါက်ကလေးများအား ပထမဆုံး...
အလုပ်သမား အဖွဲ.အစည်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်ပေးအပ...
ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာမြို.နယ်အတွင်း ပဒံကျေးရွာ၊...
မြောက်ကိုးရီးယားနိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီ(၃)ခုအား ကုလသမဂ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင်.အား ဂျပန်နိုင်ငံ Tor...
(၆၆)နှစ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ.နေ. အထိမ်...
ပြည်သူလွတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်း International La...
ဆုငွေဘတ် ၁ သန်းတန် မူးယစ်ရာဇာ စောလားပွယ်ကို ထိုင်...
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူြး...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး အောင...
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြတ်ြ...
ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမြင်.ဇော် ဖြူးချောင်းရေအားလျှပ်စစ်...
အိုစမာဘင်လာဒင် အာဖဂန်ကို ထိန်းချုပ်မည်. မဟာဗျူဟာတစ...
ပထမအကြိမ် ပြည်သူလွှတ်တော် တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေး(၂၃)ရ...
ကျေးရွာတစ်ရွာ ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး ငွေ...
ကုသမဂ္ဂ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မူ. အကူညီပေးရေးဆိုင်ရ...
မြန်မာ-ကိုးရီးယား နှစ်နိူင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီ...
နယ်စပ်ဒေသဖွံ.ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် ၄၆၇ဒသမ ၆၀၅ ဘီလီ...
CDMA ဖုန်းဆက်သွယ်ရေးစခန်းငယ် တည်ဆောက်ပြီးစီး
မြန်မာ-ဂျာမနီနှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင်.ဆောင်ရ...
Lanith နှင်. မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ.ပူ...
ဌာနအသွင်သဏ္ဍာန်နှင်. အနှစ်သာရပြောင်းလဲရေး တွင်တစ်ထော...
ရေဒါဖျက်ဒုံးကျည်များ ထုတ်လုပ်ရန် အိန္ဒိယကြိုးပမ်းလျ...
ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာကံဇော် ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရို...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက်မြို.နယ် အကြိုအခြေခံမီး...
ကနီမြို.၌ သစ်သားဓါတ်တိုင်များအစား ကွန်ကရစ်ဓါတ်တိုင...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာစို...
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဥ...
နိုင်ငံတော်နှင်.တပ်မတော်၏ သဘောထားအမှန်ကိုသိမြင်၍ေ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်း မြန်မာအာမခံလုပ်ငန်းဆ...
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E Mr.BAN Ki-moomနှင်.ဇ...
ကလိမ်ကကျစ် ဒေါ်စုကြည်ထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
အမြင်မှန်ရလာသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် NLD ကိုယ...
အလွန်ကွာလှသည် မြန်မာချင်းတော့ပုတ်သိုးပြ သူ့အဖေသူရဲ...
ကုလ အထူးကိုယ်စားလှယ်အား ထွက်တွေ့ရန် ခြံရှေ့တွင် လေ...
ဒေါ်စုနဲ့ NLD ရဲ့ ပြောတာတွေနဲ့ လုပ်တာတွေဟာ ရှေ့နောက...
ဒေါ်စု က လွတ် တော် ကို ဒီ လို စတိုင် နဲ. တက် မယ်တဲ...
စာသားမပြင်လည်း ကျမ်းကျိန်လိုက်ရခြင်း (သို့) အရည်အခ...
နိုင်ငံရေး အကြောင်းဘာမှ နားမလည်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစြု...
သက်ကြီးရွယ်အို အချိန်ကျမှ မနေတတ်မထိုင်တတ်သူများ
ရိုဟင်ဂျာ တိုက်ထုတ်ဖို့ဆိုရင် ဒီစာလေး အိတ်ဆောင်ထား...
ကျွန်မကိုခိုင်းပါဆိုတဲ့ NLD နဲ့ ဆန်ရှင်ဖွင့်တာလိုခ...